Daryeelka Kalluunka Telescope | Kalluunka
Daryeelka kalluunka Telescope
El kalluunka telescope Waa muunad la kala soocay iyada oo aan shaki ku jirin iyada indho waaweyn oo dhinacyada u dheggan ahaanshaha asymmetrical waxayna guud ahaan yihiin madow. Kalluunkan waxaa iska leh qoyska Caraius auratus waxaana sidoo kale loo yaqaan kalluunka madow ee madow. Waa kalluun aan u baahnayn daryeel gaar ah oo aad loogu jecel yahay aquariums-ka soo jiidashadiisa awgeed.
Waa a kalluun deggan oo nabdoon iyo inkasta oo ay jiraan noocyo kala duwan oo midabbo ah, tan iyo markii lagu soo rogay taranka maxaabiista aadka u horumarsan, qaar ka mid ah tijaabooyinka tayada sare leh ayaa leh midab aad u daran inkasta oo kuwa ugu caansan ay yihiin madow. Waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee sidoo kale loo yaqaan: kalluunka cirka, indhaha xumbada, demekin, isha masduulaaga iyo madaxa libaaxa.
Markay tahay kalluun biyo qabow daryeelka gaarka ah ee noocyada biyaha kulul leh looma baahna. Ma haysto kuleyliye heerkulkiisu ahaado mid deggan oo aan ka badnayn 24ºC, waxay ku nool yihiin si dhammaystiran inkasta oo lagu taliyo in aanay isbeddel kedis ah ku yeelan heerkulka maxaa yeelay way dhiman karaan.
Waa kalluun kan leh Dareenka dareenka ayaa si sax ah indhaha u ah waxayna u nugul yihiin inay qaadaan fungusSidaa awgeed, dayactirka aquarium-ka ayaa ah waxa ugu muhiimsan ee caafimaadka lagu ilaaliyo. Xilliga ay u muuqato mid taagan oo aan firfircooneyn, waa in loo fiirsadaa maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inuu jiran yahay. Waa in maskaxda lagu hayaa in kalluunku kolba marka uu weynaado oo sii weynaado, aragga oo luma uu noqdo mid aad u daran.
Ku saabsan filterka quraaradda ma noqon karto mid aad u awood badan, maaddaama kalluunka telescope-ku uu aad ugu yar yahay dabaalkiisa oo uu ku dambayn karo jiiditaan iyo walaac. Sidoo kale laguguma talin karo inaad yeelato waxyaabo qurxin kara oo waxyeello keeni kara, aragtidaada oo xaddidan ayaa kaa dhigi karta inaad iyaga isku dhacdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Aquarium-ka biyaha qabow » Aquarium biyo qabow » Daryeelka kalluunka Telescope
Sidee loo ogaadaa ragga, kalluunka aquarium-ka ee dheddigga, dheddigga?
Indhaha qabashada, kalluunka kulaylaha ah ee daryeelka fudud